Tianao ve ny hijery lamaody amin'ity fahavaratra ity? Avy eo dia ataovy azo antoka ny famenoana ny poketranao miaraka amin'ny akanjo terracotta. Io eo akaikin'ny loko voajanahary io, dia tena voajanahary, tony, ary miaraka amin'ny fomba maoderina sy mavitrika.
Iza no loko terracotta?
Io loko io dia hiasa amin'ny fahavaratra amin'ny fahavaratra sy ny fararano, saingy mendrika ny mahafantatra fa tsy mandeha mankany amin'ny zazavavy rehetra izany. Amin'ny toe-javatra sasany, ny takaitra dia afaka manampy ny taona ary mahatonga ny fitaratra ho maitso -ary.
Tena tsara ho an'ny vehivavy terracotta, ny lokon'ny volom-behivavy, izay manana volo amin'ny hoditra, mainty hoditra, maso mena. Ankoatra izany, ny loko rehetra amin'ny loko terrakotta amin'ny brunettes dia tsara tarehy - manantona mazava tsara ny aloky ny volony sy ny hodiny. Ny vintan'aretina manga - ny loko dia afaka mamily ny fiheverana amin'ny fisehony amin'ny tenany manokana, fa raha misafidy karazany mena sy mena ianao, dia afaka mahazo tsipika mafana sy malefaka. Tsy mifanentana loatra amin'ny ankizivavy terracotta miaraka amin'ny hoditra malefaka sy ny volon'ala.
Terracotta dia maneho fahatokisana. Ny ankizivavy tia an'io loko io, aza miahiahy ny toetrany, miorina mafy amin'ny tany izy ireo, mahatsiaro voaaro. Tsy te hijery ny voninkazo mangovitra izy ireo, fantany fa ho voamarika sy hankasitrahana izy ireo.
Loko terracotta amin'ny akanjo
Ny loko terrakotta dia inona? - Maro ireo tovovavy no manontany tena, efa zatra nandritry ny taom-bolana vitsivitsy lasa amin'ny lamba fotsifotsy. Ny fanangonam-bokatra dia manazava fa ny tendron-tsorok'adiny dia manga manopy mavo, akaikin'ny lokon'ny tanimanga dorana. Tamin'ity taona ity, mihoatra noho ny tamin'ny endriny loko voajanahary, dia ilaina ny mihaino ny fironana mody ary manandrana an'io loko io.
Alohan'ny handehananao any amin'ny toeram-pivarotana amin'ny zava-baovao, mila mahafantatra ianao hoe inona ny loko terracotta mifamatotra amin'ny:
Ny firaiketam-bozaka sy fotsy fotsy dia heverina ho manerantany;
Mijery tsara tarehy vita amin'ny lavanila vita amin'ny lavanila, manga, maitso matevina, saingy tsy maintsy raisina ao an-tsaina fa eo an-dàlam-piainany izy ireo, amin'ny ankapobeny, mibanjina tsara kokoa izy ireo;
Ny endriky ny trompetra sy ny jirony dia mamiratra ary amin'ny fahavaratra;
Ny fifanoheran-kevitra mendri-kaja dia mety ho maridrefy vita amin'ny burgundy-terracotta, izay mifanentana tsara amin'ny akanjo fombafomba;
Ny tsipika mahazatra isan-karazany dia tratra raha mampifangaro fitafiana terracotta amin'ny voanio, pistache ary mena;
dia hampitombo ny loko amin'ny vatohara tercotta sy ny loko mavokely.
Manao ahoana ny lokon-trondro vita amin'ny akanjo?
Ny mofomamy vita amin'ny lamba dia tsy mora foana, saingy misy ohatra vitsivitsy hanampy anao hahatakatra ny maha-izy azy:
Ho hitanao tsara ny akanjo fotsy amin'ny akanjo miloko volomparasy iray na akanjo maroloko iray, dia afaka mamelatra akanjo fotsy sy fotsy ihany koa ianao miaraka amin'ny akanjo marika sy kofehy kofehy - samy mety tsara amin'ny asam-borona;
Ny akanjo terracotta loko tsara kokoa dia ny mitafy akanjo muffled-mena - ao anatin'io endrika io dia afaka mandeha amin'ny daty na mandeha;
raha manahy momba ny fanontaniana momba ny akanjo terracota ianao, mba hijery tsara azy, dia mandehana amin'ny zavatra mavokely, ohatra, ao ambadiky ny tampoka izay azonao anaovana akanjo lava lava be dia be - tsara io fety io ho an'ny fety, fitsidihana toeram-pisakafoanana;
amin'ny fialan-tsasatra, ento miaraka aminao mozika terracotta sy jersey pistachio - izy ireo dia mahasoa na eny amoron-dranomasina na amin'ny fitsangatsanganana.
Photoshoot ny zazakely
Hevitra ho an'ny sary mitifitra ao amin'ny studio
Ny fampakaram-bady amin'ny ririnina - hevitra ho an'ny sary fitifirana
Tsara tarehy ve ny mifatotra amin'ny laces?
Style sy sary
Shorts ho feno - ahoana ary amin'ny inona no tokony harahina?
16 mahatalanjona momba ny fiainana amin'ny boky an'ny ankizy
T-shirt mody 2014
Ara-tafika milina - sary 46 maka sary amin'ny lamaody isan'andro
Salady avy amin'ny courgettes amin'ny Koreanina - fomba mahavariana mahasalama mahatsikaiky mahatsikaiky any Azia
Sakafo ho an'ny olona matavy
Capelin - tsara sy ratsy
Chocolade paste - ny fomba tsara indrindra hanamboarana zava-mamy ao an-trano
Lily avy amin'ny kofehy
Divertikulitis - soritr'aretina, fitsaboana
Ahoana no hitantanana ny zava-drehetra sy hiaina fiainana feno?
Mampifanaraka ny rindrina ho an'ny loko tapaka
Ahoana no hanaovana shaurma ao an-trano?